बैंकिङ कारोबारमा दृष्टिविहीनका समस्या : न त साक्षीविना खाता खोल्न मिल्छ, न एटीएम नै पाइन्छ !
अहिले प्रायः मान्छे पैसा बोकेर हिंडदैनन् । लुगा कपडा किन्न त परैको कुरा खाजा खाँदा पनि मोबाइल बैंकिङबाटै पैसा तिर्ने गर्छन् । खल्तीमा पैसा र कार्ड बोक्न नपर्ने हुँदा प्रायःले यसै गरिरहेका हुन्छन् । प्रविधि र विकासले यति फड्को मारिसक्दा पनि दृष्टिविहीनहरूले भने अझै पनि सहजै बैंकमा खाता खोल्न पाएका छैनन् ।
खाता खोल्नुपर्दा साक्षी बस्ने मान्छे खोज्नुपर्ने, पैसा झिक्दा अथवा पठाउँदा हस्ताक्षरको साटो ल्याप्चे लगाउनुपर्ने, एटिएम नदिने आदि समस्याहरू भोग्नु परिरहेको दृष्टिविहीनहरूको गुनासो छ ।
नवलपरासीका सौगात वाग्ले काठमाडौंको धुम्बाराहीमा बस्नुहुन्छ । उहाँ केही महिना पहिले लाजिम्पाटमा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता खोल्न जानुभयो र बैंकका कर्मचारीलाई आफू बैंकमा खाता खाल्न आएको बताउनुभयो । तर, सौगातलाई एक्लै आएको देखेर कर्मचारीले खाता खोल्न मानेनन् ।
आफ्नो खाता खोल्नलाई अर्को व्यक्तिको खोजी हुँदा आफूलाई निकै खिन्न लागेको सौगातले नेपालमतसँग बताउनुभयो ।
दृष्टिविहीन शिल्पा ढुंगेल नेपालका सरकारी बैङ्कहरूले नै आफूहरूमाथि विभेद गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबै दृष्टिविहीन अरूको भरमा पर्नुपर्ने अवस्था छैन । दिनभरि आफैं काम गरी आत्मनिर्भर भएका छौं । सक्षम हुँदाहुँदै पनि आफूहरूमाथि बैङ्कले गरेको व्यवहारले थप पीडा दिएको छ ।”
“पढाइको लागि काठमाडौं आएको छु । जता गयो उतै साथमा कसलाई लिएर हिंड्नु ! आफैं हस्ताक्षर गर्न सक्छु भन्दा पनि बैंकले पत्याएन,” सौगातले भन्नुभयो ।
राष्ट्रबैंकदेखि लिएर कुनै पनि बैंकले दृष्टिविहीनलाई एटीएम दिन मान्दैनन् । सौगात भन्नुहुन्छ, “खाता खोल्दा मान्छे चाहिने, पैसा झिक्न, जम्मा गर्न जाँदा पनि अर्को मान्छे नै चाहिने । कतिसम्म खेताला खोजिहिंड्नु ! बैंकको नीतिले हामीलाई निकै समस्या भएको छ ।”
सौगात आफैं फाइनान्स पढिरहनुभएको छ । उहाँलाई पढाइसकेपछि बैंकमै काम गर्ने इच्छा छ । तर, बैंकले दृष्टिविहीनहरूलाई गरेको व्यवहार देख्दा भने दिक्क लागेको बताउनुहुन्छ ।
“मलाई लोकसेवा लडेर राष्ट्र बैंकमा जागिर खाने रहर छ । तर, नेपालका बैंक र दृष्टिविहीनहरूका लागि बनाइएको नीतिले गर्दा यो अवसर गुमाउनुपर्छ कि भन्ने पीर परेको छ,” सौगातले भन्नुभयो ।
गोर्खाको अजिरकोटकी रोशनी अधिकारीले बनस्थलीमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खालेको २ वर्ष भयो । तर, आफैं पैसा निकाल्न पाउनुभएको छैन । बैंकिङ कारोबार गर्दा आमालाई साथमै लिएर जानुपर्छ ।
आमा वा बुवासँगै बैंकमा पुगे पनि पैसा झिक्दा हस्ताक्षरको साटो ल्याप्चे लगाउनुपरेकोमा भने उहाँलाई निकै चित्त दुख्यो । एएलबीमा अध्यनरत रोशनीले आफू हस्ताक्षर गर्न सक्षम हुँदाहुँदै पनि ल्याप्चे लगाउनुपर्दा मनमा खिन्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “ल्यापटप चलाउँछु, मोबाइल सजिलैसँग चलाउँछु, हस्ताक्षर पनि गर्न सक्छु तर बैङ्कले हामीले हस्ताक्षर गरेको स्वीकार्दैन । सबै क्षेत्रबाट विभेदमा परेका हामीलाई बैङ्कले पनि विभेद गर्छ ।”
दृष्टिविहीनहरूले ल्याप्चे लगाएर झिक्नुपर्ने पैसा पनि सँगै अर्को सहयोगी नहुञ्जेल झिक्न मिल्दैन । “म अहिले विद्यार्थी छु । कहिले कतै कहिले कतै जानुपर्छ । सधैं साथमा बा, आमा र भाइलाई लान त सकिंदैन नि ! अन्य सबैको विश्वास पनि हुँदैन ! के त्यस्तो वेला मैले बैङ्कबाट पैसा झिक्न नै नपाउनु त ? किन बैंङ्कले हामीलाई यति धेरै अविश्वास गर्छ ?” रोशनीले प्रश्न गर्नुभयो ।
अझ एटीएम नदिंदा बैङ्कहरूले दृष्टिविहीनहरूमाथि निकै विभेद गरेको उहाँको ठहर छ ।
रोशनी भन्नुहुन्छ “म त अहिले परिवारसँगै बस्छु । समस्या पर्दा आमाबुवालाई भन्छु, सहज नै छ । तर, म जस्ता धेरैजसो साथीहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका छन् । उनीहरूलाई बैङ्कले गर्ने यस्तो व्यवहारले निकै समस्या भएको छ ।”
इमेल, इन्टरनेटको जमानामा नेपाल सरकारले दृष्टिविहीनहरूका लागि नम्बर डायल गर्दा आवाज दिने एटीएमको व्यवस्था गर्नुपर्ने दृष्टिविहीनहरू बताउँछन् ।
नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपाने यो विषयमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि सुनुवाइ नभएको बताउनुहुन्छ ।
बैङ्कमा एक्लै कारोबार गर्न नपाउँदा र एटीएमको प्रयोग गर्न नपाउँदा संविधानले दिएको गोपनीयताको हक आफुहरूमा लागू नभएको उहाँको तर्क छ । न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “बैङ्कमा कति पैसा जम्मा छ, कति झिक्ने भन्ने व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा पनि दृष्टिविहीनहरूले अरूलाई सुनाउँदै हिंड्नुपर्छ ।
एभरेष्ट बैङ्क, एनआईसी एसिया बैङ्क र सनराइज बैङ्कले कतिपय सुविधा दिएको भए पनि सबैले पाउन नसकेको नेपाल नेत्रहीन संघले जनाएको छ ।
न्यौपाने भन्नुहुन्छ, “हामीले ६ वर्षदेखि सरकारसँग यो विषयमा कुरा गरिरहेका छौं, आफ्ना समस्या सुनाइरहेका छौं तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।”
राष्ट्रबैङ्कले दृष्टिविहीनहरूले चिन्नसक्ने पैसा छाप्ने व्यवस्था हुनुपर्ने न्यौपानेको थप भनाइ छ ।
बैङ्कमा एक्लै कारोबार गर्न नपाउँदा र एटीएमको प्रयोग गर्न नपाउँदा संविधानले दिएको गोपनीयताको हक आफुहरूमा लागू नभएको नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “बैङ्कमा कति पैसा जम्मा छ, कति झिक्ने भन्ने व्यक्तिगत गोपनीयताको कुरा पनि दृष्टिविहीनहरूले अरूलाई सुनाउँदै हिंड्नुपर्छ ।
नेपालमा राष्ट्रबैंङ्क लगायत ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्ग गरी १ सय ५३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । तर, कुनै पनि बैङ्कले दृष्टिविहीनहरूलाई साक्षीविना एक्लै कारोबार गर्न दिंदैनन् र एटीएम पनि दिदैनन् ।
दृष्टिविहीनहरूको गुनासोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल भने अपांगता भएका व्यक्तिलाई विभेद नगरेको दावी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अपांगता भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि विभेद नगरीकन सपांगलाई भन्दा प्राथमिकतामा राखेर वित्तीय कारोबार गर्न दिनू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तसर्थ; अपांग, महिला, जेष्ठ नागरिकलाई विशेष ध्यान दिएर सेवा दिइरहेका छौं ।”
दृष्टिविहीनहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ छ ।
“एटीएम दिएर मात्रै भएन । सपांग व्यक्तिको लागि प्रयोगमा आएको एटीएम दृष्टिविहीनको लागि उपयुक्त नभएर उनीहरूकै सुरक्षाको लागि कुनै बैङ्कले नदिएको हुनसक्छ,” दृष्टिविहीनहरूलाई एटीएम किन नदिइएको भन्ने प्रश्नमा ढकालले भन्नुभयो ।
नेपालमा दृष्टिविहीनहरूको संख्या ठ्याक्कै कति छ भन्ने तथ्यांक छैन । २०६८ सालको जनगणना अनुसार ९४ हजार ७ सय ६५ दृष्टिविहीन छन् भने दृष्टिविहीनको क्षेत्रमा गर्ने संस्थाहरूले देशभर तीन लाखभन्दा बढी दृष्टिविहीनहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।